Italy yeLake Maggiore Travel Guide uye zvitsva
Europe Itari IItaly Lakes
Ita Zivo Maggiore
Imwe yeIt Top Lakes
Lake Maggiore, kana Lago di Maggiore , imwe yemakungwa makuru eItaly uye anozivikanwa zvikuru . Yakagadzirwa kubva pagungwa, gungwa rakakomberedzwa nemakomo ari kumaodzanyemba uye makomo kusvika kuchamhembe. Inzvimbo yakareba uye yakamanikana, inenge makiromita makumi matanhatu kureba asi makiromita anenge 1 kusvika ku4 muhupamhi, neine nzvimbo yakakwana kumativi echikepere makiromita 150. Kupa misi yose mabasa ekushanyirana uye mhepo yakanyatsonaka, gungwa rinogona kushanyirwa chero nguva ipi zvayo yegore.
Gungwa reMaggiore, kuchamhembe kweMilan, riri pamuganhu weRitalia yeLombardie nePiedmont uye nzvimbo yekuchamhembe kwechikepe ichienda kumaodzanyemba kweSwitzerland . Gungwa iri makiromita makumi maviri kuchamhembe kweMilpensa Airport yeMilan.
Kwokugara paChikepe Maggiore
Mitsva inogona kuwanika kumhenderekedzo yegungwa. Stresa nderimwe remaguta makuru ekufambira ane mahoteli, mahoitoro, mabhizimisi, nzvimbo yezvitima, uye chikepe chengarava uye mabhazi okufamba.
Kutakura kuenda nekubva kuLake Maggiore
Mhenderekedzo yekumadokero yeLake Maggiore inoshandiswa naMilan kuenda kuGeneva (Switzerland) nemugwagwa wezvitima nemagariro mumaguta akawanda kusanganisira Arona uye Stresa. Locarno, Switzerland, kumucheto kuchamhembe kwegungwa iriwo mumugwagwa. Nhandare yepedyo ndeyeMilan Malpensa. Bus service pakati peMalpensa Airport nemataundi epaDormelletto, Arona, Belgirate, Stresa, Baveno, Pallanza, uye Verbania inopiwa neAlibus (vimbisa nekambani yebhasi kana uchifamba kunze kwechando).
Kuenda Kwose kweLake
Feri uye hydrofoils dzinobatanidza mizinda mikuru yegungwa uye kuenda kuzvitsuwa. Mabhazi anoshandawo nemataundi akapoteredza gungwa. Rwendo rwezuva rakanaka kubva kuStresa riri kutora chikepe kana hydrofoil kuSwitzerland uye kudzoka nechitima.
Lake Maggiore Top Attractions
Borromeo Islands : Zvitsuwa zvitatu zvinonakidza zvinogona kuwanikwa nechikepe kubva kuStre-Isola Bella, Isola Madre, uye Isola dei Pescatori.
Villa Pallavicino Pagari : Paki iri pa Villa Pallavicino, pedyo neStresa, ine zvivako zvemazamu uye zvezvinyorwa zvezvirimwa nemarudzi akawanda emichero nemhuka. Yakazaruka zuva nezuva kubva pakupera kwegore kusvika kwegore raOctober 31.
Villa Taranto Botanical Gardens : Minda yemiti iri mumuguta muduku weVerbania, pedyo neSwitzerland glaciers.
Lagoni di Mercurago : Paki iri pamakomo kunze kweArona pedyo neguta duku reMercurago inzvimbo yakanaka yekufamba uye kugomo motokari (yakavharwa kumotokari). Mupaki mune mhuka dzakawanda, shiri, uye michero uye mashoma madziva maduku.
Mottarone Gomo : Unogona kutora motokari yemotokari kubva kuStresa Lido kana kuyendesa kusvika panoramic Borromea mumugwagwa kubva kuStresa kusvika kumakomo ari pamusoro pegungwa. Kubva kumusoro, pane 360-degree view yegungwa rehara uye neAlps. Muzhizha ndiyo nzvimbo yakanaka yekufamba kana kuveza uye munguva yechando pane kutsika.
Masvingo uye Nhare : Rocca di Arona inogara pamatombo pamusoro peArona uye ine maonero akanaka echikepe. Iyo nhare yaiva nzvimbo yehondo dzakawanda asi masara iye zvino ipaki yepaguru nemateki uye peacocks. Muzana remakore rechi12 Angera Castle ndiyo yakachengetedzwa imba ine chido chemuori mukati. Pedyo nomuganhu weSwitzerland, nhare dzeCannero dzinogara pachiwi chinonyengera pedyo nehombekombe.
Chechi yeSanta Caterina del Sasso : Chechi yezana remakore rechi12 iri munzvimbo yakanaka, yakavakwa mumatombo. Inogona kusvika pamugwagwa kana kufamba nechikepe.
Santa Anna Gorge : Mhara pamucheto weRwizi rweCannobino, nzvimbo inofanirwa ye whitewater rafting uye kayaking.
Italy yeruwa reRwizi
Idzo Top 10 Zvinhu Zvokuita muLake Como
Enda Kuziva Lake Como, Inonyanyozivikanwa neItaly
Best Rated Hotels in Lake Como
Kuona Shaman At The Spa
Kukunda Coffee Co Brews Tradition muAlburquerque
Ice Skating Rinks paLong Island
Hondo Yenyika II Chirangaridzo muWashington, DC
Disneyland California: Nzira Yokushanyira Nzira Yakajeka
The 8 Best Boat Anchors Kutenga muna 2018
Mutambo weViking muHafnarfjordur, Iceland
Great Cocktail Bars muDenver
Kushanyira Tsime reRoma
Bhuku reBill Time Advantage Plan